Lelee Sheen-Professional Manufacturer of Zoom Block Camera - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Na-eduga Nmepụta Igwefoto Igwefoto Igwe Igwe Dị Anya
Anyị nwere ihe karịrị 10 + Afọ bia imechi igwefoto experence
Hangzhou View Sheen Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ na-eduga mbugharị igwefoto na-eweta igwefoto. Ebumnuche anyị bụ ịghọ onye na - eweta ngwa ngwa igwefoto na - ebu ngwa ngwa nke ụwa.
Ele Sheen Technology malitere na 2016 wee nweta asambodo nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke mba na 2018. Ndị ọrụ R&D bụ isi sitere na ụlọ ọrụ ndị ama ama na ụlọ ọrụ ahụ, na ahụmịhe ha karịa afọ 10.
Ele Sheen Teknụzụ na-aga n'ihu na teknụzụ bụ isi nke ọdịyo na vidiyo, nhazi vidiyo vidiyo, njikwa moto. Usoro ngwaahịa ahụ na-ekpuchi usoro niile nke ngwaahịa sitere na 3x ruo 90x, Full HD na Ultra HD, mbugharị nkịtị na mbugharị dị ogologo, ma gbasaa na modulu thermal, nke a na-ejikarị na UAV, nyocha na nchekwa, ọkụ, ọchụchọ na nnapụta, njem ụgbọ mmiri na ala, yana ngwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ngwaahịa na teknụzụ enwetawo ikikere mba na ikike nwebisiinka nke ngwanrọ, ma nwee nnabata CE, FCC na RoHS.
Ele Sheen Technology ngwaahịa na-eje ozi a iche iche set nke vetikal ahịa ekpuchi ihe karịrị 20 mba na ihe karịrị 100 ahịa. Anyị nwere ndị ọrụ aka ndị ọrụ aka ọrụ iji hụ na azịza ngwa ngwa maka mkpa ndị mmekọ.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ OEM ọkachamara na ODM iji zute ụdị ahịa dị iche iche. N'ime afọ ole na ole gara aga, View Sheen mere ka omimi ya na ahụmịhe ya zute mkpa ndị ahịa na ahịa dị iche iche.
Anyị nwere 4 uru
1. Ndị otu ọkachamara: Ndị isi otu R & D sitere na ụlọ ọrụ ndị ama ama, yana nkezi nke afọ 10 'R&D ahụmahụ. Anyị nwere nnukwu nkwakọba na al algorithm, nhazi onyonyo vidiyo, nnyefe ntanetị, ntinye vidiyo, njikwa mma, wdg
2. Gbado anya: Na-etinye aka na nyocha na mmepe, imepụta igwefoto mbugharị maka ihe karịrị afọ 10.
3.Nghọta: Usoro ngwaahịa ahụ na-ekpuchi usoro niile nke ngwaahịa sitere na 3x ruo 90x, 1080P na 4K, mbugharị nkịtị na mbugharị ogologo oge ruo 1200mm.
4. Quality nkwa: etozu na zuru ezu mmepụta usoro na àgwà akara hụ ngwaahịa pụrụ ịdabere na ngwaahịa.